बर्जर पेन्ट्सले ल्यायो ‘उपहार वर्षा’ योजना- बजार - कान्तिपुर समाचार
बर्जर पेन्ट्सले ल्यायो ‘उपहार वर्षा’ योजना
जेष्ठ ६, २०७९ कान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौँ — बर्जर पेन्ट्स नेपालले 'बर्जर उपहारको वर्षा' योजना सार्वजनिक गरेको छ । नेपालमा २ दशकदेखि पेन्टहरुमा एक परिचित ब्राण्ड हो- बर्जर । बर्जर पेन्ट्सले जेठ १ गतेदेखि प्रि–मनसुन ग्राहक योजना ‘बर्जर उपहारको वर्षा’ ल्याएको हो । यस योजना अन्तर्गत ७५ हजार रुपैयाँ मूल्य बराबरको बर्जर पेन्ट्सको कुनै पनि इमल्सन उत्पादन खरिद गरेमा ग्राहकले स्योर सट पुरस्कार जित्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
लक्की ड्र मार्फत एक भाग्यशाली विजेताले बम्परमा रोयल इनफिल्ड बुलेट बाइक जित्न सक्नेछन् । अन्य बम्पर पुरस्कारमा सीजी ४३ इन्च टीभी, सामसुङ ७.५ केजी टप लोडिङ वासिङ मेसिन, भिडियोकन १९० लिटर फ्रिज र सीजी भ्याकुम क्लिनर रहेका छन् । यो योजना बर्जरको वेदरकोट लङ लाइफ, वेदरकोट अलगार्ड फेमिली, वेदरकोट च्याम्प, वेदरकोट एन्टी–डस्ट, वेदरकोट स्मुथ, वालमस्ता, वालमस्ता लाइट एक्सटेरियर इमल्सन तथा इन्टेरियर इमल्सनतर्फ सिल्क ब्रिथ इजी, सिल्क ग्ल्यामर, सिल्क लक्जरी, इजी क्लिन फ्रेस, इजी क्लिन परिवार, बाईसन इमल्सन परिवार र बाईसन लाइट इमल्सनमा लागू हुने कम्पनीले जनाएको छ । बर्जरका उत्पादनमा कुनै लेड, मर्करी तथा क्रोमियमजस्ता हानिकारक तत्व नरहेको कम्पनीको दावी छ ।
प्रकाशित : जेष्ठ ६, २०७९ १२:५५
बाबुराम भट्टराईले आफ्नो वडा जोगाए भने नारायणकाजी श्रेष्ठको वडाको वडाध्यक्षमा कांग्रेस उम्मेदवार विजयी
जेष्ठ ६, २०७९ हरिराम उप्रेती
गोरखा — स्थानीय तह निर्वाचन नजिकिएसँगै शीर्ष दुई नेता एक सातादेखि नै चुनावी प्रचारका लागि आफ्नो जिल्लामा ‘अड्डा’ जमाएर बसे । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का संघीय परिषद् अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराई र माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ चुनावी प्रचारको क्रममा प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नम्बर २ अन्तर्गत पर्ने पालिकामा आफ्नो वर्चश्व स्थापना गर्न खटिएका थिए ।
२०७४ को निर्वाचनमा पनि यहि निर्वाचन क्षेत्रबाट दुई नेताको प्रतिस्पर्धा भएको थियो । वैशाख २३ मा एकै दिन जिल्ला आएका दुई नेता चुनावी प्रचार सकेर वैशाख ३० मा मतदान गरेर मात्र राजधानी फर्किए । चुनावी प्रचारको एक साता अड्डा जमाएर बसेका दुई नेताले मतपरिणाम सार्वजनिक हुँदा आफ्नै पालिकाको नतिजा भने आफ्नो पक्षमा पार्न सकेनन् । भट्टराईले आफ्नो वडा जोगाए भने श्रेष्ठले आफ्नै पालिका र वडाको वडाध्यक्षसम्म जोगाउन सकेनन् । श्रेष्ठको वडामा कांग्रेस वडाध्यक्षका उम्मेदवार विजयी बनेका छन् ।
जसपाका संघीय अध्यक्ष भट्टराई सत्ता गठबन्धन दलको चुनावी सभालाई छाडेर चुनावी प्रचारको क्रममा गृहपालिका पालुङटारमा केन्द्रित थिए । एक साताको अवधिमा उनले पालुङटारमै धेरै समय खर्चिए । सत्तारुढ गठबन्धन दलबाहिर चुनावी तालमेल नगर्ने उद्घोष गरेका भट्टराईले आफ्नो गृहपालिकामा एमालेसँग चुनावी तालमेल गरे पनि सफल हुन सकेनन् ।
एमालेसँग तालमेलअघि भट्टराईले कांग्रेससँग चुनावी तालमेलको प्रयास गरेका थिए । पालुङटारमा चुनावी तालमेलका लागि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पनि सहमत थिए । देउवा र भट्टराईले मेयर र उपमेयरमा चुनावी तालमेलको आन्तरिक सहमति गरेका थिए । सहमतिअनुसार मेयरमा कांग्रेसले जसपालाई सघाउने र जसपाले उपमेयरमा कांग्रेसलाई सघाउने सहमति बन्यो । देउवासँग छलफल गरेर चुनावी तालमेल गरेका भट्टराईको दल जसपाले नारायणी अधिकारीको उपमेयरको उमदेवारी वैशाख १६ मा फिर्ता लियो ।
केन्द्रीय नेतृत्वको सहमतिपछि देउवाद्वारा हस्ताक्षरित कांग्रेस मेयरका उम्मेदवार दिपकबाबु कँडेलको उम्मेदवारी फिर्ताको पत्र वैशाख १६ मा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय आइपुगेको थियो । समय घर्किएपछि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पत्र पुगेपछि कांग्रेस उम्मेदवार कँडेलको उम्मेदवारी जोगियो । त्यसपछि पनि भट्टराईले कँडेलको उम्मेदवारी निष्क्रिय पारी कांग्रेससँग तालमेलको प्रयास जारी राखे । केन्द्रमा भट्टराई-देउवाबीच तालमेलको आन्तरिक सहमति बने पनि स्थानीय स्तरमा वडा बाँडफाँट नमिल्दा तालमेल भाँडियो ।
तीनवटै दल एकल रुपमा अघि बढे । जसपा उपमेयरबिनै चुनावी प्रचारमा थियो । निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा पालुङटारको उपमेयरमा जसपाले एमालेलाई सघाउने र मेयरमा एमालेले जसपालाई सघाउने गरी चुनावी तालमेल भयो । दुई दलबीचको तालमेलले पनि सार्थकता पाउन सकेन । एमालेबाट मेयरमा उम्मेदवारी दिएर पछि निष्क्रिय बनेका हरि भट्टले ९ सय ४१ मत ल्याएका छन् । पालुङटारमा एमालेसँग तालमेलबाट मेयर लडेका जसपा उम्मेदवार गुरुङ तीन सय ५५ मतले मात्र पराजित भएका छन् । एमालेको सबै भोट भने जसपाले तान्न सकेन ।
भट्टराईको गृहपालिकामा माओवादीका उम्मेदवार विवश चिन्तनसँग जसपा उम्मेदवार गुरुङ ३ सय ५५ मतान्तरले पराजित बनेका हुन् । २०७४ को निर्वाचनमा पालुङटार नगरपालिकाको मेयरमा कांग्रेसका दीपकबाबु कँडेल विजयी बनेका थिए । यसपटक तेस्रो बनेका कँडेलले चार हजार ९ सय ९७ मत ल्याएका छन् । उपमेयरमा पनि माओवादी केन्द्रकी वन्दना पाण्डे विजयी बनिन् ।
५ हजार ५ सय ७९ मत ल्याएर पाण्डे विजयी बनेकी हुन् । उनको निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेसकी चेतकुमारी श्रेष्ठले पाँच हजार ७७ मत ल्याइन् । जसपासँग तालमेल गरेको एमालेको तर्फबाट उम्मेदवारी दिएकी पार्वती देवी पाठकले ४ हजार २ सय ८१ मत ल्याइन् । १० वडा रहेको पालुङटारमा भट्टराईको पार्टी जसपाले वडा नम्बर १, ५ र ८ नम्बर वडाको वडाध्यक्ष जितेको छ । वडा नं. १ भट्टराईको आफ्नै वडा हो । उक्त वडाका वडाध्यक्ष कृष्णबहादुर परियारले ६ सय ४८ मत ल्याएर प्यानलसहित विजयी बने ।
पालुङटारसँगै जोडिएको अर्को पालिका सिरानचोक माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठको गृहपालिका हो । श्रेष्ठको दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र सिरानचोक गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा कांग्रेस उम्मेदवारबाट पराजित बनेको छ । श्रेष्ठले मतदान गरेको आफ्नै गृहवडा, वडा नं. ८ मा समेत नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार वडाध्यक्षमा विजयी बनेका छन् ।
कांग्रेस वडाध्यक्षका उम्मेदवार दलमान गुरुङले ७ सय १६ मत ल्याएर वडाध्यक्षमा विजयी बनेका हुन् । माओवादी वडाध्यक्षका उम्मेदवार बनेका दीपक श्रेष्ठ ६ सय ६९ मत ल्याएर पराजित बने । वडा सदस्यमा भने माओवादी उम्मेदवार विजयी बनेका छन् । २०७४ को निर्वाचनमा भने उक्त वडाको वडाध्यक्षमा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार विजयी बनेका थिए ।
सिरानचोक गाउँपालिका अध्यक्षमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार ज्ञानेन्द्र गुरुङ र उपप्रमुखमा कांग्रेसकै उम्मेदवार रीता देवकोटा विजयी बनिन् । गुरुङ ५ हजार ४ सय ३ मत ल्याएर विजयी बने । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेकपा माओवादी केन्द्रका नवराज पुडासैनीले ४ हजार १ सय ६८ मत ल्याएर पराजित बने । त्यस्तै उपप्रमुखमा विजयी कांग्रेस उम्मेदवार देवकोटाले ४ हजार ८ सय ४ मत ल्याइन् । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेकपा माओवादी केन्द्रकी पूर्णकुमारी ढकालले ३ हजार ९ सय २ मत ल्याइन् ।
आठवटा वडा रहेको सिरानचोक गाउँपालिका वडाहरू १, २, ३ , ४ र ८ नेपाली कांग्रेसले जितेको छ भने ५, ६, ७ माओवादी केन्द्रले जितेको छ ।
गोरखाको प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नम्बर २ अन्तर्गत पर्ने पालुङटार नगरपालिकाको प्रमुख/उपप्रमुख तथा अजिरकोट र वारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाको अध्यक्ष/उपाध्यक्ष भने माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार विजयी बनेका छन् । क्षेत्र नम्बर २ अन्तर्गत नै रहेको सिरानचोकको अध्यक्ष/उपाध्यक्षमा मात्र माओवादीले पराजय बेहोरेको हो ।
प्रकाशित : जेष्ठ ६, २०७९ १२:५१
नेपाल एसबीआई बैंकको मुद्दतीमा डबल र ट्रिपल धमाका योजना
टीभीएस अपाचे आरटीआर १६० फोरभी आरटीएफआई बजारमा
धनगढीको भाटभटेनीमा एनएमबी बैंकका ग्राहकले ‘क्यासब्याक’ पाउने
ग्लोबल आईएमईले ग्राहककै रोजाइको डिजाइनमा डेबिट कार्ड दिने
आरोही श्रेष्ठ र कान्समा अवार्ड विजेता शाहलाई परिसंघको सम्मान
ग्लोबल आईएमई बैंकले हज यात्रीलाई विदेशी मुद्रा सटही गरिदिने